Brezila: Valdira, mianatra Baiboly an-telefaonina ary mampiasa labozia
MPONINA 982 501 976
MPITORY 4 102 272
FAMPIANARANA BAIBOLY 4 345 532
Mianatra eny an-tsaha miaraka amin’ny labozia
Manompo any amin’ny faritany mitokana any Brezila ny mpivady mpisava lalana manokana iray. Henony hoe efa nianatra Baiboly ny tovovavy iray atao hoe Valdira, tamin’ny 13 taona lasa. Nankany aminy àry izy ireo, ary nandeha lalan-tany sy nita renirano mampidi-doza. Hitan’izy ireo hoe efa te hianatra mafy i Valdira. Lavitra loatra anefa ny misy azy, ka fomba hafa no tsy maintsy nanohizana ny fianarany. Nanana finday i Valdira saingy tsy mazava tsara ny antso raha tsy any amin’ny saha iray lavitra ny tranony. Tsy afaka nianatra koa izy raha tsy taorian’ny amin’ny sivy alina. Dia eritrereto hoe mahita tovovavy iray eny an-tsaha ianao amin’ny alina be, ary mianatra Baiboly an-telefaonina izy miaraka amin’ny labozia.
Arahiny amin’ny telefaonina koa ny fivoriana alahady. Entiny eny an-tsaha ny Baiboly sy ny fihirana ary Ny Tilikambo Fiambenana. Mankany foana izy na avy aza ny orana, fa mitondra elo fotsiny.
Nandeha 90 kilaometatra mahery i Valdira tamin’ny Martsa mba hanatrika fivoriana manokana tany amin’ny Efitrano Fanjakana. Navoaka tamin’io Ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao nohavaozina amin’ny teny portogey, ka faly erỳ izy nahazo ny anjarany. Maro no nidera ny ezaka ataony mba hianarana Baiboly. Hoy anefa izy: “Tsy hoe sarotra be ange ilay izy e!”
“Fantatro fa tsy maintsy ho avy atỳ ianareo”
Indianina mipetraka any Kolombia ny Yukpa. Nikasa hitsidika ny faritra iray misy azy ireo i Frank, mpisava lalana manokana. Notenenin’ny olona anefa izy hoe masiaka be i John Jairo, lehiben’ilay tanàna. Noroahiny daholo mantsy izay mpivavaka tonga nitory tao. Tratrany nitaky ampahafolon-karena ny pasitera iray, indray mandeha, ka tonga dia nanao tifi-danitra izy mba hampitsoaka azy.
Kolombia: Frank, mpisava lalana manokana, mampianatra olona avy amin’ny foko yukpa
Hoy i Frank: “Iza, hoy ianareo, no nihaino anay voalohany rehefa tonga tany izahay? Ny zanakavavin’i John Jairo! Raha vao nasehonay azy ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, dia hoy izy: ‘Ity mihitsy ny fivavahana tiako harahina!’ Lasa haingana izy nampandre ny dadany, dia avy eo izahay nasaina nankany. Nitebiteby be izahay. Tonga dia niteny anefa Atoa Jairo hoe: ‘Fantatro fa ny fivavahanareo no marina. Nahita boky hoatran’iny nomenareo ny zanako iny aho, valo taona lasa izay. Tao amin’ny fanariam-pako tao Becerril no nahitako azy. Novakiko ilay izy, dia niandry anareo foana aho. Fantatro fa tsy maintsy ho avy atỳ ianareo. Tiako raha ampianarinareo Baiboly izahay mianakavy sy ny olona eto an-tanàna. Vonona handray anareo izahay.’
“Nanganohano ny ranomasonay tamin’izahay naheno an’izany. Tafavory ny iray tanàna mba hihaino ny hafatra nentinay, dia i John Jairo no nandika teny. Nampindraminy ampondra izahay rehefa nody, mba hitondra ny entanay. Mitarika fampianarana Baiboly 47 izao izahay ary olona 120 avy amin’ny tanàna samihafa no mianatra, ka anisan’izany i John Jairo sy ny zanany vavy.”
Niova ilay mpanenjika
Mipetraka any Ekoatera i José, ary Katolika nafana fo izy taloha. Hoy izy: ‘Tsy tiako maizina ny Vavolombelon’i Jehovah. Nanenjika azy ireo aho nandritra ny folo taona. Nitaona olona aho mba hampijaly azy ireo sy hanendrikendrika azy ireo hoe mpangalatra. Tsy nanaiky aho raha tsy izaho no nanidy kadanà ny efitra nanagadrana azy ireo, rehefa tany amin’ny paositry ny polisy. Nosimbanay ny fiaran’ny Vavolombelona iray, indray mandeha. Nisy fotoana koa natsipinay tany anaty hantsana ny môtô an-dry zareo.
‘Voan’ny gripan-kisoa aho tamin’ny 2010. Nasain’ny dokotera nifindra tany amoron-tsiraka àry aho, satria mafana kokoa any. Tany amin’ny toeram-pambolena sy fiompian’ny havanay aho no nipetraka, ary izaho no lasa nikarakara an’ilay izy. Izaho irery no tao, dia tena te hiresaka tamin’olona aho. Mbola ny Vavolombelon’i Jehovah ihany anefa no tonga tany amiko. Niresaka tamin’izy ireo aho satria tena nanirery. Gaga aho fa nahay Baiboly be ry zareo. Te hahalala zavatra fotsiny aho dia nanaiky hianatra. Nivory aho rehefa afaka enim-bolana, ary gaga fa tsara fanahy ny olona tany sady niahy be an’ahy. Lasa saina aho hoe: “Ireto angamba no tena mpanompon’Andriamanitra.” Nandroso aho ary natao batisa tamin’ny Aprily 2014.
‘Nanenina be aho nanenjika ny Vavolombelona. Navelan’i Jehovah hanonitra kely ny nataoko anefa aho. Nadinadinina aho tamin’ny fivoriamben’ny faritra tamin’ny 4 Oktobra 2014. Nitantara ny fanenjehana nataoko taloha aho, dia avy eo nanontany ilay mpandahateny hoe: “Iza no tena tianao hangatahana famelana tamin’ireo olona nenjehinao?” Tonga aho dia namaly hoe: “Ny Rahalahy Edmundo, fa tsy haiko hoe ahoana no hahitako azy.” Hay izy efa nasain’ny mpiandraikitra ny faritra nankao ambadiky ny lampihazo. Latsa-dranomaso ny mpanatrika rehefa nahita anay sy Edmundo nifamihina sy nitomany teny ambony lampihazo.’
“Jehovah ô, mba ataovy hitan’ny Vavolombelonao re aho e!”
Paragoay: Anontanian’ilay tovovavy ireo anabavy raha Vavolombelon’i Jehovah izy ireo
Nigaingaina be ny andro sady efa mitataovovonana. Efa vita ny faritany nanendrena an’ilay andia-mpitory tao Asunción, any Paragoay. Nikiry hitory tao amin’ireo trano vitsivitsy teo akaiky teo anefa ry zareo. Hoy ny anabavy iray: “Misy olona mivavaka angamba ao.” Nitsiky ny tovovavy iray raha vao nahita an’ireo anabavy sady nanontany raha Vavolombelon’i Jehovah izy ireo. Nanazava izy fa efa iray volana izay no nifindrany tao Paragoay noho ny asany. Efa nianatra Baiboly, hono, izy tany Bolivia. Tsy nisy nahalala ny toerana misy an’ireo Vavolombelona anefa teny amin’ny manodidina, ka nivavaka izy hoe: “Jehovah ô, mba ataovy hitan’ny Vavolombelonao re aho e!” Dia tamin’io andro io ireo anabavy no tonga tao aminy. Nanao fandaharana izy ireo mba hanohizana ny fianarany.